Home Technology Health Comic Language Translation Emotion
2011 ၏ဂရင်းနစ်စံချိန်ဝင် ထူးဆန်းထွေလာများ
သူငယ်ချင်းတို့ရေ၊ကောင်းသောနေ့လေးပါနော်၊ ဒီနေ့တော့ ကုန်ဆုံးတော့မှာ ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ထူးဆန်းတွေလာ တွေကို ပြောပြမယ်နော်၊ ရွှေဘလည်း ...
ပုံ ။ ရှင်မတောင်သနပ်ခါး ပုံ ။ သီးသီး သနပ်ခါးကို ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးများ နှစ်သက်ကြပါ...
အာဟာရ နှင့် ကျန်းမာရေး(မြန်မာမုန့်များ)
ဘိန်းမုန့် အာဟာရပြည့်စွာ စားသောက်ပါ... အာဟာရပညာရှင်များ၏ တင်ပြချက်အရ လူ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် စာတ်အမျိုးမျိုး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားရှိသည် ဖြစ်သောကြောင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လှုပ်ရှား သွားလာနေရသော ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင် ထိုစာတ်များ ခန်းလျော့သွားသည်နှင့်အညီ ယင်းစာတ်အမျိုးမျိုးကို ပြန်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ရန် အစားအစာအမျိုးမျိုးကို စားသုံးရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်ဟု သိရပါသည်။ တို့ကြောင့် အာဟာစာတ်ပြည့်ဝ၍ ကျန်းမာဝဖြိုးစေရန် အခြားနည်း လမ်းတစ်ခုမှာ အစားမရှောင်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ အစားရှောင်ခြင်းမှာ ရောဂါ ရှောင်သူများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစားမရှောင်သဖြင့် ရောဂါဖြစ်သွားသူများထက် အစားမှားပြီး ရောဂါဖြစ်ပွားသူများထက် အစားရှောင် လွန်းသဖြင့် အာဟာရစာတ် မပြည့်ဝဘဲ ရောဂါဖြစ်ပွားသူတို့က ပိုမိုများပြား ကြောင်း တွေ့ရှိရလေသည်။ ထိုကြောင့် ကျန်းမာ၍ ပိန်နေသောသူများ ၀စေရန်အတွက် အစားမရှာင်ပါနှင့်။ အာဟာရစာတ်ပြည့်ဝသော အစားအစာများကို စားပေးခြင်း အထူးသဖြင့် ကယ်လိုရီကြွယ်ဝသော ထမင်း၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ပျားရည်၊ သကြားလုံး၊ ကိတ်မုန့်၊ အိုက်(စ်)ကရင်၊ ပူတင်းတို့ကို စားပေးခြင်းဖြင့် ၀ဖြိုးစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် အာလူး၊ သကြား၊ ပြောင်း၊ သာကူ၊ အာသာလွတ်၊ ပီလောပီနံဥ၊ ကန်စွန်းဥတို့မှာလည်း ကယ်လိုရီစာတ် ကြွယ်ဝသော အစားအစာများပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် အလျဉ်းတွေ၍ ]ကယ်လိုရီ} အကြောင်းကို ရှင်းပြချင်ပါသည်။ အာဟာရပညာရှင်များက ကယ်လိုရီဟု အမည်ပေးခေါ်ဝေါ် ထားကြသည့် အရာသည်အခြားမဟုတ်။ ကိုယ်ငွေ့ ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေသော ပူနွေးသည့် ကိုယ်ငွေ့သည် လူတို့၏ အသက်ပင် ဖြစ်ပေသည်။ ကိုယ်ငွေ့ ကင်းပျောက်သွားသည်နှင့် လူတို့၏အသက်သည်လည်း ချုပ်ငြိမ်းသွားပေလိမ့်မည်။ ထို့အတူ ရှိသင့်သည့် ကိုယ်ငွေ့ထက် လျော့နည်းသွားပါက ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်တတ် ပေသည်။ ထို့ကြောင့် လူသေတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် အေးစက်နေခြင်း၊ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းသူ၏ ခြေဖျားလက်ဖျားများ အေးစက်နေခြင်း စသည့် လက္ခဏာများကို တွေ့သိကြရခြင်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်စေရန် အဓိကအကျ ဆုံး သောအရာမှာ ယင်းကယ်လိုရီပင် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုကယ်လိုရီ လုံလောက်စွာ မရရှိပါက ရောဂါအမျိုးမျိုး ဖြစ်ပွားတတ်၍ ကြာသော် အသက်ရှုခြင်း ရပ်ဆိုင်းသွား နိုင်၏။ ယင်းကယ်လိုရီမရှိက အခြားဓာတ်များ လှုပ်ရှားတည်ဆောက်ခြင်းလည်း ရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်ပေသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာများသည် ဆန်စားသူများ ဖြစ်သည့်အလျောက် ကယ်လိုရီဓာတ်အား (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆန် (ထမင်း) စားခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ တချုိ့ ၀çသူမျာက ပိန်ချင်ကြသည်။ ပိန်စေရန် ဆေးစားခြင်း၊ ငွေကုန်ခံကာ လေ့ကျင့်ခန်းယူခြင်း၊ အကုအသခံခြင်များ ပြုလုပ်တတ်ကြပါသည်။ ထိုမျှ ငွေကုန်ကြေးကျခံရန် မလိုပါ။ မိမိတို့နေ့စဉ်စားသုံးနေကျ အစားအစာများကို လျှော့စားခြင်းဖြင့် ၀çသူ ပိန်ကြောင်း ဆေးနည်းကောင်းကို လွယ်လင့်တကူပင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် သကြားဓာတ်ကို လျှော့စားရန် အရေးကြီးပါသည်။ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားရန် လိုပါသည်။ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ အဆီလွတ်ဟင်းချိုရည်များကို သောက်သုံးသင့်ပါသည်။ အချုိ့ ၀çသူများသည် အစားလျှော့တတ်ပါသည်။ အမှန်မှာ အစား မလျှော့သင့်ပါ။ အစားလျှော့သည့်အတွက် အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းများ ဖြစ်တတ် ပါသည်။ သို့သော် ဖေါ်ပြခဲ့သော လျှော့စားသင့်သော အစားအစာများကို လျှော့စား ခြင်းဖြင့် အချိုးအစားကျနလှပသော အခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၀သူပိန်ကြောင်း ဆေးနည်းကောင်းမှာ ထူးဆန်းစွာ ပြုကျင့်ရန် မဟုတ်ပါ။ အစာအာဟာရတိုင်း မဟုတ်။ လျှော့စားသင့်သော အစားအစာ များကိုသာ လျှော့စားရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် သကြားဓာတ်နှင့် ကယ်လိုရီ <ကယ်ဝသော အစာများဖြစ်သည်။ ဥပမာ-နံနက်ခင်း သို့မဟုတ် နေ့လည် အစာပြေ အဖြစ် ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုပ်နှင့် ကော်ဖီ သို့မဟုတ် လက်ဖက်ရည် စားသောက် ခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ အာဟာရပညာရှင်များ၏ တင်ပြချက်အရ ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ် တစ်ချပ်တွင် ကယ်လိုရီ (၄၈.၈၁) ဂရမ် ပါဝင်သဖြင့် ကယ်လိုရီလျှော့စားလိုသူတိုင်း သည် ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ်အစား ဘိန်းမုန့်ကိုစားသင့်ပါသည်။ ယင်းသို့ ဆိုလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဘိန်းမုန့်သည် အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့သော မြန်မာမုန့်ဟု မယူဆစေလိုပါ။ ဘိန်းမုန့်သည် ကယ်လိုရီဓာတ် ပါဝင်သောလည်း အခြားအာဟာရ ဓာတ်များ ပါဝင်ကြောင်း နှိုင်းယှသ်တင်ပြပါရစေ။ ဘိန်းမုန့်သည် အဖိုးနည်းသော်လည်း အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူစားသုံး နိုင်သည်။ ဤနှိုင်းယှဉ်ချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အာဟာရဓာတ်လွန်ကဲစွာ ပါရှိသည်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း ထိုက်သလောက် ပြည့်စုံသော မြန်မာမုန့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့တိုင်အောင် ခန္တာကိုယ်၌ ကုန်ခန်းသွားသော အားများကို ပြန်လည် ပြည့်ဝစေသော ရေငွေ့ဓာတ်သည် ဘိန်းမုန့်တွင် ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ်ထက် ပို၍၀င်ကြောင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။
FROM FOREVER FRIEND ...
Posted by aungkyawzinmyint at 3:40 AM2comments
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်
လက်ထပ်ကြတော့မယ်ဆိုပြီး မင်္ဂလာရက်တစ်ရက် ရွေးချယ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်....
ကောင်းလေးကတော့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းမယ့် သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာရက်လေးကို
တခြားကောင်လေးတယောက်နဲ့ မမျှော်လင့်ဘဲ လက်ထပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို
မကြာခင်မှာပဲ ကောင်လေးလည်း စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေပြီး အိပ်ယာထဲလဲတော့တယ်....
ကောင်လေးရဲ့အိမ်ရှေ့မှာ ရပ်ပြီး တံခါးခေါက်လိုက်တယ်..
ဆေးနည်းနည်းကုတတ်တော့ လာကူညီပေးတာပါဒကာမလေး" လို့မိန့်ကြားလိုက်တယ်...
အိမ်ရှင်တွေကိုပြောကြည့်တော့ သဘောတူခွင့်ပြုတာကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးကို
ဘုန်းတော်ကြီးအတွက် သောက်တော်ရေတခွက်ပေးလိုက်ပြီး လူမမာကုတင်ဘေးမှာပဲ
လို့ မိန့်တော်မူပြီး ကောင်လေးအိပ်ခန်းထဲက ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်တစ်ချပ်ဆီကို
အဲ့ဒီ ပင်လယ်ကမ်းခြေဟာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီး လူအသွားအလာမရှိဘူး.....
လူမမာကောင်လေးက မှန်ထဲကပုံရိပ်ကို စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေစဉ်မှာပဲ
မိန်းကလေးအလောင်းတစ်လောင်းဟာ လဲလျောင်းနေတဲ့အနေအထားနဲ့ ကမ်းခြေမှာရှိနေတာ
ကိုမြင်လိုက်ရတယ်..... ခဏကြာတော့ လူတစ်ယောက်ဖြတ်လျှောက်လာတယ်...
ဖြတ်လိုက်တယ်... ဒါပေမယ့် သူ့ဆီမှာမြေကျင်းတူးဖို့ ဘာပစ္စည်းမှပါမလာဘူး....
လူရွယ်ဟာ သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ မြေတွေကိုယက်ပြီး တဖြေးဖြေးချင်းတူးလာလိုက်တာ
အလောင်းကို မြုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ ကျင်းတစ်ကျင်းကိုတူးလို့ပြီးသွာ
အဲ့လူလည်း မိန်းကလေးအလောင်းကို ကောင်းမွန်စွာမြုပ်နှံပေးခဲ့ပြီ
မျက်နှာပြန်ပေါ်လာပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာအဖြစ် ပြောင်းသွားပြန်တယ်...
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ မှန်ထဲက ပုံရိပ်တွေ အကုန်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်....
ကောင်လေးလည်း အံ့သြစွာနဲ့မင်သက်နေတုန်းမှာပဲ ဘုန်းတော်ကြီးက
"ခုဆိုရင် ဒကာလေးလည်း သဘောပေါက်လောက်ပြီထင်တယ်...
ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့စကားအဆုံးမှာ ကောင်လေးလည်း အမြင်မှန်ရပြီး
နားလည်သဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်.. နောက်ပိုင်းမှာ ကောင်လေးလည်း
ဆိုလိုချင်တာကတော့ လူသားတွေအချင်းချင်း ဒီဘ၀မှာအဖေ၊ အမေ၊
ဆွေမျိုးညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ၊ ချစ်သူ၊ ရန်သူအဖြစ်နဲ့
ဘ၀တစ်ခုခုက ပြုခဲ့တဲ့ရေစက်ကံကြောင့်သာ ဤမျှများပြားလှသော
ဆွဲထားလို့မရပဲသေကွဲ၊ ရှင်ကွဲ မျိုးစုံနဲ့ခွဲခွာကြရမှာပါ.....
စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ.. မေတ္တာတွေ ပေးနိုင်သလောက်ပေးနိုင်အောင်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်းလူတိုင်းဘယ်သူကမှ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်အချိန်မှာ
Posted by aungkyawzinmyint at 9:30 PM0comments
Copied it from the www.missgreenlady.com
အုန်းသီးကနေ ထုတ်လုပ်တဲ့ အုန်းနို့၊ အုန်းမှုန့်၊ အုန်းသီးဖတ် စသည်တို့သည်လည်း အစားအသောက်များ၊ ဟင်းလျာများ၊ မုန့်များ ချက်ပြုတ်ရာတွင် အသုံးပြုကြပါတယ်.. အချို့သောနိုင်ငံများတွင် အုန်းနို့မှာ ဟင်းလျာအတော်များများတွင် မပါမပြီး အသုံးပြုကြတဲ့ အရာသာထူးကဲ ကောင်းမွန်စေသော ဟင်းချက်ဖွယ် တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်.. မြန်မာနိုင်ငံတွင်တော့ ဟင်းချက်ရာတွင် အသုံးပြုမှု နည်းပါးသော်လည်း မြန်မာမုန့် တော်တော်များများတွင် အုန်းနို့ပါဝင်တတ်ပါတယ်.. အုန်းရည်မှာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူများစွာ ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း အုန်းနို့နှင့်ပြုလုပ်သော အစားအသောက်များ အလွန်အကျွံစားသုံးပါက သွေးတိုးရောဂါသမားများအတွက် အလွန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်..
ကျန်းမာရေးအတွက် အုန်းရည်များများသောက်ပြီး အုန်းဆီ များများလိမ်းလို့ အုန်းနို့ကိုတော့ သင့်တင့်ရုံသာ စားကြပါစို့နော်…. :)
Kiran Patil ရဲ့ Health Benefits of Coconut Oil, Coconut Water Health Benefits နှင့် Funzug.com မှ အချက်အလက်များကို မှီငြမ်းကိုးကားပါသည်။ ဤပိုစ့်ပါ အချက်အလက်များကို အတည်ပြုပေးပြီး အချက်အလက်အသစ်များ ထပ်မံရှာဖွေ ကူညီပေးသော ဒေါက်တာဇီဝက(ဆေး-၂) အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Posted by aungkyawzinmyint at 9:17 PM0comments
၄။ လက်ချောင်းသုံးချောင်းနဲ့ အပေါ်မျက်ခွံကို ဖိပေးပါ။ ၂ စက္ကန့်လောက် ဖိပြီး လျော့ချလိုက်ပါ။ ၅ ကြိမ်ခန့်လုပ်ပေးပါ။
၇။ နံရံတစ်ခုနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပါ။ ပြီးရင် ခေါင်းကိုမလှုပ်ပဲ မျက်လုံးနဲ့ နံရံပေါ်မှာ စာရေးပါ။ ပထမတော့ ခက်ခဲတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ ပျော်စရာလေးတစ်ခု ဖြစ်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ စာလုံးကြီးကြီးရေးလေ ထိရောက်မှု ပိုရှိလေပါပဲ။
လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကို အချိန်ကြာကြာလုပ်တာထက်စာရင် မှန်မှန်လေးလုပ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ကွန်ပျူတာသုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်တစ်ခုကို အာရုံစိုက်ပြီးအချိန်အကြာကြီး အလုပ်လုပ်နေစဉ်မှာ မျက်လုံးကို ဟိုဟို၊ ဒီဒီရွှေ့လျားအလုပ်လုပ်စေပါ။ အလုပ်လုပ်နေစဉ် အတွင်းမှာလည်း အဝေးတနေရာကိုကြည့်ပြီး မျက်လုံးညောင်းညာမှုကို ဖြေလျှော့ပါ။ လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ကိုပူအောင်ပွတ်ပြီး မျက်လုံးပေးမှာအုပ်ပေးထားတဲ့ နည်းကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ခဏခဏ မျက်တောင်ခတ်ပါ။ မျက်လုံး ညောင်းပြီးစပ်နေတဲ့အခါ အခြေအနေပေးရင် ရေအေးလေးနဲ့ မျက်လုံးကို ဆေးကြောပေးလိုက်ပါ။( Sarmicmantra)
Tags: ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာတော့, ဗဟုသုတ, မဟုတ်ပါဘူးနော်...၊။တစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေ, မှတ်သားထားရအောင်နော်...၊၊ဒါကကျနော့်, အတွက်, အသိပညာပေးချင်ရုံပါယ...၊၊သူငယ်ချင်းတို့, အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်လို့, အနေနဲ့, အဝေးစိတ်ဖတ်ပေးကြပါ...., မျှော်လင့်ပါတယ်....၊၊၊ကျေးဇူးပြုပြီး
Posted by aungkyawzinmyint at 9:15 PM0comments
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (problem/rest/step/think)
No problem! (ပြဿနာမရှိပါဘူး)
You say no problem! when you think that something will be easy to do or get:
(ပြဿနာမရှိပါဘူး (no problem!) ကို အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို လွယ်လင့်တကူလုပ်နိုင်တယ် (သို့) ရရှိနိုင်တယ်လို့ ထင်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။)
'I need my car back by Saturday'
ငါ့ကားကို စနေနေ့ ပြန်လိုချင်တယ်။
'No problem! It will be ready by tomorrow evening.'
ပြသနာမရှိပါဘူး။ နက်ဖြန်ညနေဆိုရင် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။
'I'm looking foraone-bedroom flat in this area.'
ဒီရပ်ကွက်ထဲမှာ အိပ်ခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကို ရှာနေပါတယ်။
'No problem! There are quiteafew vacant just now.'
ပြသနာမရှိပါဘူး။ အခုလောလောဆယ် လွတ်နေတဲ့အခန်းအချို့ ရှိနေပါတယ်။
You can also say no problem! to show that you can do something that somebody has asked you to do and that you are willing to do so:
(ရပါတယ်/ ကိစ္စမရှိပါဘူး (no problem) ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အား တစ်စုံတစ်ခု လုပ်ပေးရန်တောင်းဆိုသည်ကို လိုလို လားလား လုပ်ပေးချင်ကြောင်း ဖေါ်ပြသည့် အနေဖြင့် ပြောနိုင်သည်။)
'Can you mend this torn dress for me?'
ဒီပြဲနေတဲ့ ဂါဝန်ကို ချုပ်ပေးနိုင်မလား?
'No problem! It will be ready tomorrow.'
ရပါတယ်၊ နက်ဖြန်ဆိုရင် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
You can also use no problem! as an informal reply when somebody thanks you for doing something:
(ရပါတယ်။ ကိစ္စမရှိပါဘူး (no problem) ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျေးဇူးတင်စကားပြောရာတွင်လည်း ရင်းနှီးစွာ တုန့်ပြန်သည့် အနေဖြင့် သုံးနိုင်သည်။)
'Thanks for giving mealift to the station.
ဘူတာရုံကို ကားကြုံတင်လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
And the rest (ကျန်တာကရော)
You say and the rest to show that the actual number or amount of something is more than has been stated:
(ကို တစ်စုံတစ်ခု၏ အရေအတွက် (သို့) ပမာဏသည် ဖော်ပြထားသည်ထက် ပိုမိုများပြားနေသည်ကို ဖော်ပြလိုပါက သုံးပါသည်။)
'A car like that would cost about $60,000.'
ဒီလိုကားမျိုးက ဒေါ်လာ ၆၀ ၀၀၀ လောက်တော့ ပေးရမယ်။
'And the rest! I'd say nearer $70,000.'
ကျန်တာကရော! ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင် ဒေါ်လာ ၇၀ ၀၀၀ နားကပ်နေတယ်။
It’ll take us at least three days to finish this work.'
ဒီအလုပ်ကိုပြီးဖို့ အနည်းဆုံး ၃ ရက်လောက်တော့ ငါတို့လိုလိမ့်မယ်။
'And the rest! Only half the workers are working on this project.
ကျန်တာကရော! ဒီစီမံကိန်းမှာ အလုပ်သ္မားက တစ်ဝက်ပဲ အလုပ်လုပ်နေတာ။
Step on it (မြန်မြန်မောင်းပါ)
You say step on it in an informal context when you mean that there isaneed for hurry or speed, especially with reference to drivingacar:
(မြန်မြန်မောင်းပါ (step on it) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကတော့ ကားမောင်းတာနဲ့ ပိုပြီး ဆီလျော်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အလျင်လိုတယ် မြန်မြန်မောင်းပါဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။)
You'll have to step on it or be late for the interview.
မြန်မြန်မောင်းပါ ! မဟုတ်ရင် အင်တာဗျူးနောက်ကျတော့မယ်။
Step on it. I promised my mother that we wouldn’t be late for lunch.
မြန်မြန်မောင်းပါ ! အမေ့ကို နေ့လည်စာစားဖို့နောက်မကျပါဘူးလို့ ကတိပေးထားတယ်။
I thought as much (ငါ ထင်သားပဲ)
You say I thought as much when you have found out that you were right about something that you thought or suspected:
ငါထင်သားပဲ (I thought as much) ကို တစ်စုံတစ်ရာအား သင်တွေးထင် (သို့) သံသယရှိထား တဲ့အတိုင်း ဟုတ်မှန်နေသည့်အခါတွင် အသုံးပါပြုပါသည်။)
I thought as much. That boy who's making all the noise is our neighbour's son.
ငါထင်သားပဲ။ အဲဒီဆူညံသံတွေကို လုပ်နေတဲ့ ကောင်လေးက ငါတို့ အိမ်နီးချင်းရဲ့ ကလေးပဲ။
I thought as much. The girl who got the job is the manager's daughter.
ငါထင်သားပဲ။ အလုပ်ရသွားတဲ့ကောင်မလေးက မန်နေဂျာရဲ့ သမီးပဲ။
Read more: အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (problem/rest/step/think) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%3A430639&xgs=1&xg_source=msg_share_topic#ixzz1ZxdSLtvh
Posted by aungkyawzinmyint at 5:10 AM0comments
အင်တာနက်ပေါ်ဖတ်မိသမျှ ဘာသာပြန်သည်။ အားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ထက်ကောင်းကင်
Posted by aungkyawzinmyint at 11:28 PM0comments
တစ်နေကုန် ပင်ပန်း နွမ်းနယ် နေပါသလား။ တစ်နေ့ ထက် တစ်နေ့ အားအင် ချည့်နဲ့ကာ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါ ဖြစ်နေ ပါသလား။ မကြာခဏ သမ်းဝေကာ ငိုက်မျည်း နေတတ် ပါသလား။ ပင်ပန်း နုံးချည့် ရခြင်း အကြောင်းရင်းကို ရှာကာ အမြဲ သွက်လက် အားအင် ပြည့်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၁၅ မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ အားအင်တွေ ပြန်ပြည့်ဖို့ ပထမဆုံး လုပ်ရမှာက သင့် စားသောက် နေထိုင်ပုံက သင့်ရဲ့ အားအင်တွေကို ဘယ်လို ဆုတ်ယုတ် နေစေသလဲ ဆိုတာကို သုံးသပ်ဖို့ ပါပဲ။ ရေသောက် နည်းပြီး ရေဓာတ် ခြောက်ခန်း နေသလား၊ အရက်သောက် များနေသလား၊ အစာ လျှော့စားလွန်း နေသလား၊ အချိုကဲတဲ့ အစားတွေ များများ စားလို့ သွေးထဲ သကြားဓာတ် များနေသလား၊ အိပ်ရေး မ၀ဘူးလား စသဖြင့် ပင်ပန်းစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ရှာကြည့်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှု နဲ့ ပူပင် စိုးရိမ်မှုတွေ ကြောင့်လည်း အားလျော့ စေနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့ အကြောင်းရင်း တွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ အတွက် ကိုယ်ရဲ့ စားသောက် နေထိုင်ပုံကို ဂရုပြုမိဖို့ လိုပါတယ်။
အမျိုးသမီး အများစု ပင်ပန်းရခြင်း အကြောင်းရင်းက သံဓာတ် ချိုတဲ့လို့ ပါပဲ။ ဓမ္မတာ ရာသီသွေး ဆင်းခြင်းကြောင့် သွေးထဲ အောက်ဆီဂျင် သယ်ဆောင်ပေးတဲ့ ဟေမိုဂလိုဘင် ပရိုတင်း ပမာဏ လျော့နည်းတတ် ပါတယ်။ ဓမ္မတာ ရာသီသွေးဆင်း များခြင်းကြောင့် ဖြူဖပ်ဖြူရော် ဖြစ်ခြင်း၊ အသက်ရှူ မ၀ခြင်း၊ လက်သည်း ခြေသည်း အရောင်ဖျော့ခြင်း၊ နုံးချည့်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ သံဓာတ်ကို ပြန်ဖြည့်တင်း ပေးဖို့ အတွက် အမျိုးသမီးတိုင်း သံဓာတ် အားဖြည့်ဆေး သောက်ပေးသင့် ပါတယ်။ သံဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အနီရောင် အသားတို့ကို စားပေးသင့် ပါတယ်။ ဖောလစ်အက်စစ် နဲ့ ဗီတာမင်ဘီ ၁၂ ချို့တဲ့ရင်လည်း သွေးအားနည်းတတ် ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ အများစုဟာ အိပ်ချိန် အလုံအလောက် မအိပ်တတ်ကြ ပါဘူး။ တစ်ညကို အိပ်ချိန် ခုနစ်နာရီ မှ ရှစ်နာရီကြား ရှိပါက ကျန်းမာရေး နဲ့ ညီညွတ် ပါတယ်။ တစ်ညကို ငါးနာရီ နဲ့ ခြောက်နာရီ သာ အိပ်ချိန် ရှိသူတွေက တစ်ပတ်လုံးနဲ့ ယှဉ်ပါက နှစ်ညစာ လောက် အိပ်ချိန် လွတ်သွားတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ တစ်ညကို သူများထက် အိပ်ချိန် နှစ်နာရီ လောက် လျော့ရင် တစ်ပတ် ပြည့်တဲ့ အခါ အိပ်ချိန် ၁၄ နာရီ လျော့တာကြောင့် နှစ်ညစာ အိပ်ချိန် လျော့တယ်လို့ ပြောရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်မပျော်ရခြင်း အများစုက စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ပြီး အိပ်ရေး ၀အောင် အိပ်ပါ။ အိပ်ရေးဝ မှ အားအင် ပြည့်မှာပါ။
တစ်လကျော် ကြာတဲ့ အထိ အမြဲ ပင်ပန်းနေပါက ဆရာဝန်ထံ ပြသ စစ်ဆေးခံသင့် ပါတယ်။ သွေးအားနည်းခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်တာမို့ အထူးသဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျခြင်း နဲ့ ရာသီသွေးဆင်းမှု များခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာတို့ နဲ့ တွဲဖြစ်ပါက ဆေးခန်းပြသင့် နေပါပြီ။ သွေးဆုံးတဲ့ အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတွေလည်း ကာလရှည် မောပန်း တတ်ကြ ပါတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် မဟုတ်ဘူး ဆိုရင် အိမ်နဲ့ အလုပ်မှာ ဂက်စ်ထွက် ရှိနိုင်တဲ့ အရာတွေ တပ်ဆင်ထားလား သတိထား ကြည့်ပါ။ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် ဓာတ်ငွေ့တွေဟာ အောက်ဆီဂျင် ရရှိမှုကို လျော့နည်း စေနိုင်သလို ကြာလာပါက အသက် အန္တရာယ်တောင် ရှိနေပါတယ်။
ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင် ပစ္စည်း Coenzyme Q10 က ခန္ဓာကိုယ် ဆဲလ်အတွင်း အားအင်လွှင့်ထုတ်ရာမှာ အရေးကြီးသလို နှလုံးရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်ပေး ပါတယ်။ အသက်ကြီး လာတာနဲ့ အမျှ Coenzyme Q10 လျော့နည်း တတ်လို့ ကြွယ်ဝတဲ့ အစာတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆဲလ်မွန်ငါး၊ ငါးသေတ္တာ၊ အမဲသား၊ ဟင်းနုနယ် နဲ့ မြေပဲတွေ စားပေးပါ။ Coenzyme Q10 ပါတဲ့ အားဆေး သောက်ပေးပါ။
စီရိုတိုနင်ဆိုတာ ဦးနှောက် စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေနိုင်တဲ့ ဓာတ်တစ်ခုပါ။ 5HTP (5-hydroxytryptophan)အားဆေးက ခန္ဓာကိုယ်ကနေ စီရိုတိုနင်ဓာတ် ထွက်ရှိ စေတာကြောင့် စိတ်ပျော်ရွှင် စေကာ စိတ်ဓာတ်ကျမှုကို လျော့နည်းစေ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိပ်ကောင်းခြင်း အိပ်ပျော်စေကာ အိပ်ရေး ၀စေနိုင် ပါတယ်။
ရုံးမှာ ကျတော့ မတရား ပင်ပန်းပြီး အိမ်ရောက်လို့ ရှိရင် အားအင် ပြည့်ဝနေတာမျိုး ကြုံဖူးကြ မှာပါ။ အကြောင်းပြချက် တစ်ခု ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝ စည်းချက် ကြောင့်ပါ။ သုတေသန ပညာရှင်တို့ရဲ့ လေ့လာချက် အရ ခန္ဓာကိုယ် ဇီဝ နာရီဟာ နေ့လယ် နှစ်နာရီ ၀န်းကျင်လောက်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အားလျော့ စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ဟာ ထမင်းစားပြီး နောက် လျော့ကျတတ် သလို ညဘက် ၇နာရီလောက် မှာလည်း လျော့ကျတတ် ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန် လျော့ကျခြင်းက မယ်လတိုနင် ဟော်မုန်းကို ထွက်ရှိစေ ပါတယ်။ အဲဒီ ဟော်မုန်းက ဦးနှောက်ကို အိပ်ချိန်နား နီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ပေးပို့ ပါတယ်။
သိုင်းရွိုက် ဂလင်းတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အားအင်တွေကို ဘယ်လောက် မြန်မြန် လောင်ကျွမ်း စေပြီး ပရိုတင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်သလဲ ဆိုတာကို ထိန်းချုပ်ပေး ပါတယ်။ အလုပ် သိပ် မလုပ်နိုင်တဲ့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်း အခြေအနေ (Hypothyroidism) ဖြစ်ပါက လူကို ပင်ပန်းစေ သလို ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကိုလည်း တိုးစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသားအရေ ခြောက်သွေ့ကာ အအေးဒဏ်ကို မခံနိုင် ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ဒီရောဂါ ဖြစ်ပါက အရေးကြီးတာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့် ပါတယ်။ အချိန်မီ မကုသပါက ပိုပြီး မောပန်းစေကာ အသံ အောလာခြင်း၊ မျက်နှာ ပုံပြောင်းလာခြင်း မျက်ခုံးမွေး နဲ့ မျက်တောင်ကျွတ်ခြင်း ကိုလည်း ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
ကဖင်းဓာတ် ပါရှိတဲ့ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်တို့ဟာ ခဏတာ သာ အားပြည့် လန်းဆန်း စေနိုင်ပေမယ့် နောက် ခဏအကြာမှာ အားပြန်လျော့ သွားစေခြင်းကြောင့် သိပ် အများကြီး မသောက်သင့်ဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့ကို တစ်ခွက် ကနေ သုံးခွက်အထိ သောက်ပေးလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီထက် များသွားရင်သာ မကောင်းတာပါ။ ကဖင်းဓာတ် သောက်တာ များလွန်းပါက အသွက်လွန်ခြင်း၊ ခြေချောင်း လက်ချောင်း တုန်ခြင်း၊ ကယောင်ချောက်ချား ဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဘီကိုပါ လျော့နည်း စေကာ ပင်ပန်းခြင်း၊ ကာလရှည်ကြာ အားလျော့ခြင်းတို့လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ရွှေရောင် အမြစ်လို့ ခေါ်တဲ့ Rhodiola သဘာဝ ဆေးဖက်ဝင် အမြစ်ဟာ အားအင် ပြည့်ဖြိုး လန်းဆန်း စေကာ အာရုံ စူးစိုက်မှု အားကောင်းပြီး နွမ်းနယ်မှုကို ပပျောက်စေ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကာလရှည် သုံးစွဲလို့တော့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ကယောင်ချောက်ချား ဖြစ်စေနိုင်တာ ကြောင့်ပါ။
အိပ်စက်ခြင်း ပြဿနာ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ အိပ်နေရင်း မကြာခဏ အသက်ရှူ ရပ်တတ်တဲ့ ရောဂါကြောင့်လည်း ပင်ပန်းတတ် ပါတယ်။ အဲလို အသက်ရှူ ရပ်သွားတိုင်း နိုးလာတတ် ပေမယ့် သင့်ကိုယ်သင်တော့ သတိ မထားမိပါဘူး။ သင့်မှာများ အဲလို ဖြစ်နေသလား၊ သံသယ ရှိနေရင် ဒါမှမဟုတ် သင့် အိမ်ထောင်ဖက်က သတိထားမိ နေရင် ဆေးခန်း ပြသင့် ပါတယ်။
အားအင် ပြည့်ဖြိုး စွမ်းအင် တိုးစေနိုင် ပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုခြင်းဖြင့် အသက်ကို ပိုပြီး ပြင်းပြင်းရှူ လာသလို ခန္ဓာကိုယ်ထဲ အောက်ဆီဂျင် များများ ရောက်ကာ သွေးလည်ပတ်မှူ ကောင်းစေတာ ကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် မနက်စောစော အိမ်ပြင် ထွက်ကာ လေကောင်းလေသန့် ရှူရင်း လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါ။
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်က အားများ စေနိုင်ပေမယ့် အမြန်ထွက်တဲ့ High GI အမျိုးအစားနဲ့ အနှေးထွက်တဲ့ Low GI အမျိုးအစား ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ အမြန် ထွက်တဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်က သကြားနဲ့ အမြှုပ်ပါတဲ့၊ ဂက်စ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေမှာ တွေ့ရပြီး အဲဒီ အစားအသောက်တွေ စားသောက်ပြီး ခါစ တစ်ခဏမှာ လန်းဆန်း တက်ကြွကာ နောက် ခဏနေ ပင်ပန်း သွားတတ် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနှေးထွက်တဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ကတော့ ကောက်ပဲသီးနှံ၊ ပဲအမျိုးမျိုး နဲ့ စေးကပ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ မှာ တွေ့ရကာ အားအင် အမြဲ ပြည့်စေပါတယ်။ ဂျင်ဆင်း ဆေးမြစ်ကလည်း စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာကာ အားပြည့်စေ ပါတယ်။
နေ့လယ်နေ့ခင်း ပင်ပန်းလို့ တစ်ရေးတမော မှေးတာက အားပြည့်စေ ပေမယ့် အဲလို ခဏ အိပ်လိုက်လို့ ညဘက် အိပ်မပျော် ဖြစ်ရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် နေ့လယ်မှာ အိပ်မငိုက်အောင် နေ့လယ်စာ ထဲမှာ အမြန်ထွက်တဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် High GI စာတွေနဲ့ အယ်လ်ကိုဟောကို ရှောင်ပါ။ အိပ်ချင်စိတ် ပေါက်လာရင် ဟိုနားဒီနား လမ်းထ လျှောက်လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် စားပွဲ ရှင်းလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ညဘက်မှာလည်း အချိန်မှန် အိပ်ကာ အချိန်မှန် ထပါ။ အိပ်ခါနီး စိတ်ဖိစီးမှု များစေမယ့် ကိစ္စတွေ မတွေးပါနဲ့။
* လမ်း အမြန်လျှောက်ပါ။ အလုပ် လုပ်ရင်း အိပ်ငိုက်နေပါ သလား။ အောက်ပါ တို့ကို လုပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လိုက်ခြင်းဖြင့် ပင်ပန်းမှု ပျောက်ကာ လန်းဆန်း လာပါ လိမ့်မယ်။
* ရေသောက် လိုက်ပါ။ ရေအေးအေးလေး တစ်ခွက် သောက်ရင် လန်းဆန်းသလို လက်ဖက်စိမ်း ရေနွေးကြမ်း သောက်လိုက်ရင်လည်း စိတ် ကြည်လင် သွားပါ လိမ့်မယ်။
* ပြတင်းပေါက် ဖွင့်လိုက်ပါ။ လေကောင်းလေသန့် ရှူလိုက်ခြင်းဖြင့် လန်းဆန်း တက်ကြွ လာပါ လိမ့်မယ်။
* ဗီတာမင် B12 အားဆေး သုံးဆောင်ပါ။ ကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းသလို ပင်ပန်း နွမ်းလျခြင်းကိုလည်း ပျောက်စေ ပါတယ်။
Posted by aungkyawzinmyint at 11:17 PM0comments
Madalay ICON Magazine
Myanmar Times Magazine
ချင်းတွင်း သတင်း မီဒီယာ
၁။ ယမက၀ဂ္ဂ - ၁။ ယမက၀ဂ္ဂ Chapter 01 Chapter 01 ၁။ မနောပုဗ္ဗင်္ဂမာ ဓမ္မာ၊ မနောသေဋ္ဌော မနောမယာ။ မနသာ စေ ပဒုဋ္ဌေန၊ ဘာသတိ ၀ါ ကရောတိ ၀ါ။ တတော နံ ဒုက္ခမနွေတိ၊ စက္ကံဝ ၀ဟတော ပဒံ။ ၁။ နာမ...
Toa-payoh, Toa-Payoh East, Singapore